Holmbygden.se | Horumarinta Degmada ee Holm, #ShepherdsHut – #holmbygden
Skip to content sare
Österströms Dambiisha Holiday Xarunta
← posts Older
Movies ka dhismaha tamarta dabaysha
Posted on 14 August, 2019 by Holmbygden.se
Wind dhistaa Uusimaa Bergen Crow Croft ka bilowdey soo socda in dhamaadka ah.
Halkan jira laba filimada by sameeysa Eolus gaadiidka iyo dhismaha shaqada dhigay, ugu Holmbor fog ka soo daba iyo waddooyinka ee sanadkii la soo dhaafay.
Kacsiga ee ulaha iyo rakibaadda baalashaada
Gaadiidka of garbaha Crow Croft iyo Uusimaa Bergen
Jessika Falk ka Holm inaugurates Square Festival ee Sundsvall
Posted on 26 July, 2019 by Holmbygden.se
Jessika ciyaara maanta xafladdii furitaanka ee bandhiga Square ee.
maanta 15 haddadan Square Festival ee Sundsvall iyo kale oo aan ahayn Jessica Falk ka Holm oo ciduna ma ciyaaro quduuskadhigidda masraxa ugu weyn.
Yar ayaa laga yaabaa in uu seegay in Anders “Tjacka” Søderberg xidid Sörbygden sannadkan qabsaday cusub oo soo noolaaday xisbiga wadada jir ah lagu fuliyay cusub – xisbiga torg. Artists ka weynaanta in 90s ee sida E-Type, Melodie MC dhowr riwaayadaha lagu jiro damaashaadka. First, si kastaba ha ahaatee, Jessica Falk ka Holm. waqtiga 15:00 jiid off, iyo gelitaanka waa lacag la'aan intii lagu jiray xafladii furitaanka.
dheeraad ah halkan ka akhriso Jessica Falk iyo Torgsfesten.
International dhanka ah Koonfur Afrika ciyaaray Holm Vallen
Posted on 14 June, 2019 by Holmbygden.se
Holms SK ciyaaray kulankii marti-shaqeeya ee caalamiga ah South Africans ka Azari Wind at qararka Holm.
Habeenkii arbacada, abaabulay kulan caalami ah oo u dhaxeeya Sweden, Filter ka kooban SK, iyo Koonfur Afrika, wakiil ka ah marawaxadaha dabaysha shaqaalaha martida dhismaha “Crow Croft” (qormo).
In ka badan 20 booqasho shaqaalaha tamarta dabaysha iyadoo Jilib Xidhan, waayo, ciyaarta iyo sida badan ee asxaabteena u on the-Holm gallery fadhiistay.
South Africans ayaa, kaasoo aan weligiis wada ciyaaray ciyaar kubada cagta ah, oo magaciisa dhabta ah ee qaranka isboortiga waa rugby, ciyaaray iska caabin dhab madax wanaagsan iyo kuwa xun la xoqdo adag. Waxaa intaa dheer, sidoo kale laga yaabaa ciyaaray shaqaalaha ugu fiican oo ugu goolasha badan, Mendu, Holm boos si loola simo tirada plays.
HSK weli caws ka af iyo helay kubadaha ka badan shabaqa. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 7-2 si Holm. Tan ugu muhiimsan, si kastaba ha ahaatee,, madadaalo ah shirka iyo la ansixiyey si ay ula dagaalamaan dadaalka labada kooxood la siiyo tababar fiican lugaha. Waxaan rajeyneynaa in aad hadda sidoo kale shaqaalaha martida ka badan ay daawanayeen inay u yimaadaan si ay kulan guriga xagaaga.
ujeeddooyinka: Niklas 3, Tommi Torvet (qaniimooyin for Söråkers FF) 2, Yonas 1, Mendu 1.
on 16/6 kl 14 ciyaaro kulanka soo socda ee guriga Holm Vallen dhexeeya Holm SK oo IK Fränsta. kafeega u adeegaya, hot dogs iyo hamburgerka.
Calendar ciyaarta, natiijada mm.
Info ku saabsan Holms SK iyo adeega SMS Free la news iyo natiijada ku saabsan Holms SK.
qormo: meel Crow aqalada waxay leedahay ka sokow taariikh hore ka 1600s ay u soo bandhigaan utländare. Taariikhda A akhrin wareegsan oo aqalada iyo musiibo ka cabsi badan ka dhacay halkaas oo aad ka akhrisan kartaa warbixin dheeraad ah oo ku saabsan här i Lidens Tidning.
Storpjärptjärn xiray, mar kale ka furmay Sabtidii 1 June
Posted on 21 Laga yaabaa, 2019 by Holmbygden.se
Haddaba Storjärptjärnen in Holm fiskevårdsområde t.o.m xiran. 31 May. Ciyaar ee kalluumaysiga waa 1 June. baddii waxay leedahay kaydka ah kalluun iyo char. liisanka Kalluumaysiga ugu fudud laga iibsan karaa internetka ama degaanka iyada oo wakiil, read more här på fiskesidan Holmbygden.se/fiske.
Si loo badbaadiyo wadada u gudubno, inta lagu guda jiro källossning oo ku dhow snowmelt Storpjärptjärn sida caadiga ah sanad walba oo ku saabsan maalmaha ugu horeysay ka dib markii Easter oo mar kale ka furmay Saturday ugu horeysay ee June. Had iyo jeer u qaadan in haddii aan sarcaadka ayaa sheegay in.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan kalluumaysiga ee Holm halkan
14/8: Movies ka vindkra ...
26/7: Jessika Falk ka H ...
14/6: Caalamiga ah Sydafr ...
17/3: Kulanka Sanadlaha Holms FVO
news Previous in widget NEWS ah Select Month August 2019 (1) July 2019 (1) June 2019 (1) Laga yaabaa 2019 (1) March 2019 (5) February 2019 (3) January 2019 (1) December 2018 (1) October 2018 (1) September 2018 (4) August 2018 (1) July 2018 (5) June 2018 (6) Laga yaabaa 2018 (6) April 2018 (2) March 2018 (2) December 2017 (2) July 2017 (2) June 2017 (1) Laga yaabaa 2017 (4) April 2017 (2) March 2017 (4) February 2017 (4) January 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (1) September 2016 (4) June 2016 (5) Laga yaabaa 2016 (5) April 2016 (3) March 2016 (6) February 2016 (4) January 2016 (2) December 2015 (3) November 2015 (4) October 2015 (1) September 2015 (5) August 2015 (4) July 2015 (4) June 2015 (3) Laga yaabaa 2015 (7) April 2015 (4) March 2015 (4) February 2015 (4) January 2015 (8) December 2014 (3) November 2014 (4) October 2014 (5) September 2014 (3) August 2014 (4) July 2014 (2) June 2014 (6) Laga yaabaa 2014 (5) April 2014 (8) March 2014 (11) February 2014 (4) January 2014 (7) December 2013 (12) November 2013 (12) October 2013 (10) September 2013 (9) August 2013 (15) July 2013 (13) June 2013 (18) Laga yaabaa 2013 (17) April 2013 (13) March 2013 (11) February 2013 (7) January 2013 (13) December 2012 (9) November 2012 (9) October 2012 (6) September 2012 (10) August 2012 (10) July 2012 (4) June 2012 (11) Laga yaabaa 2012 (10) April 2012 (4) March 2012 (7) February 2012 (6) January 2012 (3) December 2011 (3)
9/2: Utah: class digniin 1, baraf, V ... Inta lagu jiro maalinta Sabtida kartaa d ... Akhri wax dheeraad ah
Khatarta safafka. Traffic gacanta ku pilot weheliso ... Akhri wax dheeraad ah
16/9: Orod badan Bidaar ah ...
8/9: Sex(6) IGT xun ...
29/5: Summer furitaanka K ...